Shiinaha Tayada Sare Jumlada Awood Macaamiil Qiimo Dhimis Xusuusta Smart Dhigeyaasha Soosaarayaasha Wifi iyo alaableyda. SNOPE
Damaanad 3 bilood-1 sano
Lambarka Moodalka SNW-209
Lagu qiimeeyay Hada 10A
Xakamaynta Codka Gacan-la’aan: Gosund Smart plug wuxuu la shaqeeyaa Alexa iyo Kaaliyaha Guriga ee Google, xakamee aaladaha gurigaaga adoo si fudud amarrada codka ugu siinaya iyaga. Ku raaxayso waayo-aragnimada gacmo-la'aanta ah, waxay kaa caawineysaa inaad daryeesho hooyooyinka, carruurta, waayeelka iyo dadka oo dhan, diyaar u noqo oo isku day kuwan casriga ah ee fiilooyinka leh.
Ka Xakamee Qalabkaaga Meel Kasta Markasta: Ku xir qalabka guriga godka smart, ka soo dejiso barnaamijka 'Gosund', ka xakamee meel kasta adigoo isticmaalaya casrigaaga. Waadna u abuuri kartaa koox dhammaan wifi wabiyada oo aad daartaa oo ku demin kartaa hal guji.
Hawsha Saacadda iyo Jadwalka: Abuur saacad iyo jadwal loo habeeyay si toos ah u shid ama u damiso wixii elektaroonig ah iyo aaladaha guriga, sida ka goynta xeedho taleefankaaga oo si buuxda u buuxsamay, dejinta nalka si ay u soo galaan makhribka ama deminta qorrax-dhaca iyo wixii la mid ah. Yaree isticmaalka tamarta oo lacag dhig.
Xadhig Xariif ah oo Amni leh oo Lagu kalsoonaan karo: Qalabka fiilada casriga ahi wuxuu qaataa agabyada iyo farsamooyinka qaaliga ah, sida V-0 ololka celceliska heerkulka thermoplastics, isku xirnaanta maarta saafi ah iyo PCBA-da oo horumarsan, taas oo ka fogaan karta qatarta dabka isla markaana bixin karta badbaado xad dhaaf ah si qoyskaagu u badbaado.
Rakibid Fudud oo Degdeg ah: Si fudud ku xir dariiqa casriga ah darbiga, ku xir internetka adigoo adeegsanaya shabakadda Wi-Fi (oo keliya 2.4Ghz), looma baahna xarun iyo rukhsad. Ka dibna si xarig la’aan ah ugu xakamee qalabka guriga taleefankaaga ama codkaaga. Waxaad sidoo kale la wadaagi kartaa xakamaynta qoyskaaga oo aad ku raaxeysan kartaa habboonaanta guri caqli leh wadajir.
Hore: Warshadda Tooska ah ee Xakamaynta Tayada Sare ee Mobile App Smart Plug Wifi 16Amp
Xiga: Tayada Sare Jumlada Tayada Sare ee Qiimaynta Dawlad-celinta Smart Plug Wifi US
Warshad Qiimeeye Soo-saare Qeybiyaha Meter Power ...
Tayo sare leh jumlada Custom jaban State-Feedb ...
Tayada Sare Jumlada Custom Mashiinka Qiima jaban ...
Factory Direct Supply 2 USB Ac 100-250V Guddi M ...
Tayada Sare Jumlada Custom Cheap 3 USB + 1 TYP ...